Daraasad: Caanaha gadhoodhka/ciirta( yogurt) waxay la dagaalamaan murugada - Horn Future
Daraasad: Caanaha gadhoodhka/ciirta( yogurt) waxay la dagaalamaan murugada
Daraasad cusub oo Mareykan ah ayaa sheegtay in bakteeriyada loo yaqaano (lactobacillus) ee ku jirta caanaha gadhoodhka/ciirta ee loo yaqaano( yogurt) ka ay wanaajin karto xaaladdaha niyadda iyo in ay hoos u dhigi karto astaamaha murugada.
Waxa daraasadan sameeyay cilmi-baadhayaal katirsan kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ( University of Virginia) ee Maraykanka, taas oo lagu faafiyay majallad cilimiyeedka (Scientific Reports).
Si loo ogaado xidhiidhka ka dhexeeya cunista caanaha gadhoodhka/ciirta( yogurt) iyo hoos u dhaca calaamadaha murugada,waxa kooxda cilmi-baadhayaashu ay dabo-gal ku sameeyeen koox kamid ah jiir.
Baadhayaalkan ayaa waxa ay ogaadeen in jiirkii cunay caanahan gadhoodhka/ciirta ah ay korodhay heerka bakteeriyada (lactobacillus)ee ku jirta mindhiqirihiisa,taasoo ay ka dhalatay inay fiicnaato xaaladda niyadda iyo in ay hoos u dhacdo calaamadaha welwelka iyo murugada.
Waxa cilmibaadhayaashani sidoo kale ay sheegeen in marka ay hoos dhacdo heerka bakteeriyadan , waxa kordha heerka maadada loo yaqaano “kinorenin” ee xidhiidhka la leh astaamaha kor u kaca murugada.
« China oo ku guulaystay tijaabada diyaaradii u horeeysay ee rakaab ah ee uu sameeyay	» Ururrada gargaarka:Malaayiin dad ah ayaa u dhiman doona gaajo dalka koonfurta Sudan